Ahoana ny asany amin'ny fanokafana kaonty banky orinasa Fidulink
Safidy ny firenena izay te-hanokatra kaonty banky manerana ny kaontinanta 5. Safidio ny firenena dia hanamafy ny baikonao amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo dingana ao amin'ny tsenan'i Fidurohy. Aza adino ny mampiditra ireo antontan-taratasy mifandraika amin'ny fangatahanao manokatra kaonty amin'ny banky an-tserasera
IANAO NO EO NY FILOHA!
Fanokafana kaonty banky orinasa eo amin'ny masoivoho iray
Fanokafana kaonty amin'ny orinasa lavitra
Raha misy ny fangatahana hanokatra kaonty amin'ny banky lavitra, ny fahefana sy ny fanamarinana ataon'ny notary public dia hataon'ny mpanolotsaina Fidu anao.rohy hanolotra anao ny antontan-taratasiny.
FAMPISEHOANA NY BANK
Mpanolotsaina Fidurohy mifandray amin'ny banky mpiara-miasa ao amin'ny firenena izay nofantenanao mba hahafahana mametraka ny fangatahana sy ny antontan-taratasinao amin'ny mpandraharahan'ny banky ifandraisana aminy.
Ny fandefasana dia maharitra 48 ka hatramin'ny 72 ora arakaraka ny banky. Mandritra io vanim-potoana io dia tsy maintsy miandry ny fiverenan'ny agents banking ianao sy ny an'ny mpanolotsainao Fidu.rohy.
Ny fanamarinana ny fisokafanao ny kaontin'ny banky amin'ny banky ity iray ity dia mandefa ny laharan'ny kaontinao amin'ny banky sy ny fidiranao amin'ny Internet. Misokatra izao ny kaontinao banky orinasa.
Hanome anao izao manaraka izao ny banky:
Isan'ny kaonty amin'ny banky iraisam-pirenena
Kaonty banky maram-bola marobe
Mpampahafantatra amin'ny banky an-tserasera
Rafitra fiarovana amin'ny Internet
Banky banky (debit na crédit)
Maharitra eo anelanelan'ny 4 sy 7 andro fiasana ny fizotran'izany, izany dia mety miovaova arakaraka ny banky sy ny andrim-panjakana.
ACCOUNT BANK TRANO
AKANOKO BANK FIVORIANA ANY AFRIKA
JEREO NY ZAVATRA MISY TOKONY ETO AFRIKA NONONAO VOLANA ARA-BANKANA ONLINE
ACCOUNT FINAN-TRANO FIVORIANA MANOKANA AN-TANY ASIA
JEREO NY AINGA-TANANA TANY ANIA ASIA NONAO VOLANA ARA-BANKANA ONLINE
ACCOUNT BANK FIVORIANA ANY AMERIKA
JEREO NY HAFA AO AMIN'NY FIKAM-BOLENANA ETO AMERIKA I BOKY AKAM-BOLA ARA-BOLY AN-TRANO
BOKY FIKAMBANANA MAMPISORONANA NY FIVORIANA FIVAROTANA ANY EUROPE
JEREO NY HAFA AO AMIN'NY FIKAM-BOLENANA ANY EUROPE IOMBOHITRA FOANA BANK ONLINE
ACCOUNT BANK FIVORIANA MANOKANA ANY OCEANIA
JEREO NY ZAVA-ZANAKO TANY ACEANIA NONONAO VOLANA ARA-BANKANA ONLINE
Lisitry ny tahirin-kevitra homena amin'ny fanokafana kaonty banky orinasa
Alefaso any amin'ny: info@fidulink.com ny antontan-taratasy miaraka amin'ny laharana baikonao na amin'ny tsena Fidulink